PITA / PA6 / Ejiri POY High Speed ​​Spinning Machines Series
A na-ejikarị igwe a eme ihe maka 30-330dtex polyester POY.
Na-akwado ụdị nkedo LTM, na-eme ka agbaze CPF na-aga n'ihu, si otú a gbasaa ọrụ ndụ nke mkpọ.
Ejiri ngwongwo nke nwere akụkụ anọ dị elu na nke dị elu na-adịkwa mpịakọta.
Unique planet spinning mgbapụta na iche iche na-akwọ ụgbọala imecha mmanụ mgbapụta.
Evo na cross imenyụ usoro na equably na ike eru eru.
Onwe-achịkwa, ihe ntụgharị na akụrụngwa.
Ntughari ohuru GR, ihe ntụgharị na ihe ntinye.
Ejima ịghasa draya-free Vented PITA / PLA mpempe akwụkwọ extrusion Line
JWELL na-amalite ahịrị ejiri ejima ejiri mee ihe maka mpempe akwụkwọ PET, usoro a nwere usoro degassing, ọ nweghịkwa mkpa ihicha na mkpuchi. Usoro ntinye nwere njirimara nke ume dị ala, usoro mmepụta dị mfe na mmezi dị mfe. Ihe nkedo a na-eme ka ihe na-efu nke PET resin, ihe nkedo na nke di na mgbidi na-eme ka obi di jụụ ma melite ikike na mpempe akwụkwọ. Multi components dosing feeder nwere ike ịchịkwa pasent nke na-amaghị nwoke ihe onwunwe, imegharị ihe maka iji ihe onwunwe na nna ukwu ogbe kpomkwem, mpempe akwụkwọ na ọtụtụ-eji thermoforming nkwakọ ụlọ ọrụ.
JWZ-BM30,50,100,160 Fụọnụ Nkedo Machine
· Adabara na-amị iche iche iche iche nke ụgbọ ala urea igbe, ngwá ọrụ igbe, akpakanamde oche, akpaaka ikuku duct, akpaaka eruba board, bompa na Car spoilers.
· Ịmụta elu mmepụta extrusion usoro, dum n'ịkpa anwụ isi.
· Dị ka ihe dị iche iche si kwuo, usoro JW-DB otu ọdụ ụgbọelu hydraulic na-agbanwe agbanwe.
· Dị ka ụdị ngwaahịa dị iche iche si dị, ahaziri platen ahụ na nha ya.
· Optinal haịdrọlik servo akara usoro.
· Optinal ike akara, take-out robot.
DYSS otu-shared shredder bụ ngwa na-ebugharị ya na ọtụtụ ngwa. Emere ya iji mezuo ihe ndi ozo nke ulo oru di iche iche. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ dịgasị iche iche, gụnyere ngwaahịa plastik dị iche iche dịka blọk, ọkpọkọ na akpa ndị a kpara akpa, eriri dị iche iche ejiri mee ihe, osisi, akwụkwọ mkpofu na ahihia elektrọniks wdg. nzọụkwụ na-esote, na ihe ndị a na-emegharị emegharị nwere ike iji ya rụọ ọrụ ọzọ ma ọ bụ maka ịwepịa ya.
Pc oghere mpempe akwụkwọ, Pee Pp Osisi-Plastic Ft Extrusion, Pc Mpempe akwụkwọ, N'èzí Ngwa, Vkwanyere Corrugated Board, Vkwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi Corrugated Board,